Nu Health Products | Joe Min Zaw International Trading (Myanmar)
Daily for men (Daily-100-M)
အမျိုးသားများအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်သော ပြိုင်ဘက်ကင်း Dietary Supplement တစ်လက် ဖြစ်ပါသည်။ Dietary Supplement ၏ ထူးခြားချက်မှာ အရိုးအားကောင်းစေ ခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင် ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Daily for Men isaunique multi-mineral and multivitamin supplement specially formulated for the leading health concerns of men. The special array of vitamins and minerals was selected to support bone and immune system health in addition to -Chromium and B vitamins for the release of energy from food -Contains calcium, magnesium, and vitamin C to help maintain normal blood pressure. Antioxidants support the immune system -B- vitamins help support energy needs -Supports muscle function & heart health -Magnesium, vitamin D and B6 support muscle function.
Daily for women (Daily-100-W)
အမျိုးသမီးများအတွက် လိုအပ်သော ဗီတာ မင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီး အထူး စီမံထုတ်လုပ်ထားသော Dietary Supple- ment ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်မှီဝဲခြင်းဖြင့် အရိုး များသန်မာစေခြင်း၊ ပုံမှန်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ် မှုအားကောင်းခြင်းနှင့် နှလုံးကျန်းမာရေး အတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ Daily for Women ၏ အဓိက ပံ့ပိုးပေးမှုမှာ ကိုယ် ခန္ဓာရော စိတ်ပါကျန်းမာစေသည့် အပြင် စိတ်ခံစားမှုများကိုလည်း အထူးကောင်းမွန် စေနိုင်ပါသည်။
Daily for women provides an array of valuable vitamins and minerals in the convenience ofaonce-daily formula. Daily for Women helps build bone strength, promotesaregulatory reproductive system and supports heart health. Overall this formula can help boost physical, mental and even emotional well-being!
Vitamin D (400 IUs) to support breast health
Calcium and Vitamin D support bone health
Central Vita-Plus (Mulvita-100-NH)
Central Vita-Plus သည် ကိုယ်ခန္ဓာ အတွက် လိုအပ်သော၊ အထူးသဖြင့် ဝိတ်ချ နေသော သူများအတွက် ပုံမှန်လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်နှင့် သတ္တုဓာတ်များစွာ ပါ ဝင်သည်။ လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေး မှီဝဲနိုင်သော Dietary Supplement တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
Central Via-Plus providesawide array of necessary vitamins, minerals and other nutrients especially for those who have poor overall diets. Central Vita-Plus is recommended asageneral multivitamin product that can be taken by everyone: men, women, and seniors.
Central Sliver (MULV-300-Silver)
NU ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Central Silver Dietary Supplement အမှတ်တံဆိပ်သည် အသက် (၅၀) ကျော် လူကြီးများအတွက် လိုအပ်သော ဗီတာမင် နှင့် သတ္တုဓာတ်များစွာ ပါဝင်သည့်အတွက် တစ်နေ့ တစ်လုံးမှနှစ်လုံး ပုံမှန်မှီဝဲခြင်းဖြင့် ကျန်းမာပြီး အသက်ရှည်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ Central Silver တွင် ပါဝင်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် များကြောင့် မျက်စိအားကောင်းစေပါသည်။
Nu-Health's Central Silver isacomplete formula that provides essential vitamins and minerals targeted to support senior health and nutrition for adults over the age of 50. Many of these key ingredients can even support heart function and eye health. When Central Silver Senior Formula is taken daily and incorporated withalifestyle of healthy diet and exercise, Seniors are taking effective measures to promoteahealthy and long-lasting quality of life.
Central Silver For Men 50+
Central Silver For Men 50+ ဖြည့်စွတ်စာသည် အသက်ငါးဆယ်နှစ်နှင့်အထက် အမျိုးသားများအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ် 32 မျိုးပါဝင်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင် တစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်လုံး ပုံမှန်မှီဝဲခြင်းဖြင့် ကျမ်းမာအသက်ရှည်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နှိင်ပြီး ပါဝင်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်များ၏ အာနိသင်ကြောင့် မျက်စိအားကောင်းစေပြီး စားဝင်အိပ်ပျော်ကာ ကျန်းမာဖျတ်လက်စေပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် ဖြည့်စွတ်စာဖြစ်ခြင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ စိစစ်ထားခြင်းတို့ကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Central Silver For Women 50+
Vitamin-E Dietary Vitamin-E Dietary Supplement သည် အစွမ်း ထက်သော (Antioxidant) တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ရှူးများ၏ ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် မလိုလားအပ်သော ဓာတ်တိုး ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ထို့ ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ် ပေးပြီး နုပျိုလန်းဆန်းစေသည်။ Vitamin E ၏ ထူးခြားမှုမှာ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးရှိ ြွကက်သားများ အတွက် အောက်စီဂျင် လုံလောက်စွာရရှိရန် ထောက်ပံ့ပေးသည့် အပြင် စိုပြေသောအသားအရေနှင့် သန်စွမ်း သော ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။
Vitamin C is an important anti-aging nutrient, natural detoxifier, and antihistamine. The body does not naturally store this essential nutrient; we have to get vitamin C through our diet. Vitamin C reinforces the immune system so it able to fight against bodily stresses to promote overall health.
Melatonin Dietary Supplement သည် ဦးနှောက်တွင်ရှိသော (Pineal Gland ) ခေါ် အကျိတ်တစ်ခုမှ ထွက်သည့် ဟော်မုန်း ကို အားကောင်းစေပါသည်။ ၎င်းအကျိတ် သည် အိပ်ပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွေကို ပုံမှန် ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြား ဟော်မုန်းများကို လည်း ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် Melatonin သည် သင့်အား သဘာဝအတိုင်း အိပ်စက်အနားယူမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကူညီ ပေးပါလိမ့်မည်။
Melatonin is closely involved in the natural sleep cycle and supports restful sleep patterns. Taking Melatonin asadietary supplement is great for those who experience jet lag or occasional sleeplessness. Unique Selling Points:
- Melatonin isanatural hormone found in the body - Supports rest and relaxation to aid with occasional sleeplessness - Nutritionally supports sound sleep - Melatonin helps regulate sleep and wake cycles
NCB Omega-3, 6, 9
Omega-3, 6,9သည် နှမ်းဆီ၊ ငါးကြီးဆီနှင့် (Evening Primrose Oil) ပန်းတစ်မျိုး၏ အဆီတို့ကို ရောနှောဖော်စပ်ထားသောကြောင့် နှလုံးသွေးကြောများ အားကောင်းစေခြင်း၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု အားကောင်းစေခြင်း၊ အစာခြေစနစ် ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှု စနစ်ကောင်းမွန်စေခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ပါရှိပါသည်။
The Omega-3,6,9 formula contains Omega-3, Omega-6 and Omega-9 –the “good” fats important for supporting cellular, heart and metabolic health.
This formula containsawell-balanced proportion of Fish Oil, Flaxseed Oil and Evening Primrose, providingasource of essential and non-essential fatty acids. These nutrients are also important for promoting cardiovascular health, brain development, immune system function and blood pressure regulation.
- Leading distributor of Fish Oil Omega 3,6,9 for 20 years - Brand recognition for item FISH-100-VK is very strong - Affordable pricing with same great quality as leading brands - Important “good” fats lacking in many customer’s diets need supplementation
- Omega-3, Omega-6, Omega-9 important for cellular, heart, and metabolic health
Omega-3 ငါးကြီးဆီတွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သော အိုမီဂါ ၃ ၊ ဖက်တီးအက်ဆစ်၊ EPA နှင့်ီံ DHA ပါဝင်ခြင်းကြောင့် နှလုံးအားကောင်းစေခြင်း၊ အစာခြေစနစ် ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ဦးနှောက်ရှိ တစ်ရှူးများ အားကောင်းစေခြင်း၊ ကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန်စေခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရှိစေပါသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများရှိစေပါသည်။ ၎င်းအပြင် မကြာသေးခင်ကမှ ရရှိခဲ့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက် များအရ ငါးကြီးဆီသည် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးပေးပါသည်။
Flaxseed isarich source of essential fatty acids and is the most concentrated vegetarian source of Omega-3 found in nature. Flaxseed can help promote cardiovascular and nerve health while providing an energy source for the body.
Kid Lite ကလေး Dietary Supplement သည် ကလေးများအတွက် အထူးဖော်စပ် ထားပြီး ဗီတာ မင် A, C, D, E, B1, B2, B6, B12 နှင့် အခြား ဗီတာမင်များစွာ ပါဝင်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးများအတွက် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ နှင့် ကြီးထွားမှုအတွက် အထူးကောင်းမွန် ပါသည်။ လတ်ဆတ်သော သစ်သီးအရသာ နှင့် ချစ်စရာကောင်းသော တိရစ္ဆာန်ပုံ သဏ္ဌာန် ဆေးလုံးလေးတွေက ကလေးများ အတွက် နှစ်သက်စရာ ဖြစ်သည်။
Kid Lite is specially formulated for children and contains Vitamin A, C, D, E, B1, B2, B6, B12 and more, The trace minerals in this unique product are important for growing kids to have optimum overall health. Children will enjoy taking Kid Lite regularly due to its fun animal shapes and great fruity flavors.
L-Carnitine သည် အာဟာရပြည့်ဝသော Dietary Supplement ဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးပြီး ြွကက်သားများကို သန်မာ စေပါသည်။ (HDL) ဟု ခေါ်သော အကျိုးပြု ကိုလက် စတောကို မြှင့်တင်ပေးပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေရန် ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
L-Carnitine isapowerhouse nutrient that promotes growth and development. L-Carnitine is also used for fat-burning increasing energy, and improving resistance to muscle fatigue. In some individuals, L-Carnitine can even help raise HDL cholesterol (the good cholesterol) and maintain triglycerides already withinanormal range.